EPrague - elinye lamadolobha amahle kakhulu emhlabeni, okuyinto nakanjani ongathanda ukuvakashela yilowo nalowo phakathi kwethu. Lena isikhungo izivakashi, umfudlana abahambi ukwazi akumvimbi lapha, ngisho ebusika. Empeleni, isikhathi esingcono ukuvakashela umuzi entwasahlobo, lapho imvelo evuka ngemuva kokulala ebusika, noma ekwindla, lapho izivakashi emzini iba kancane kancane. Futhi izindleko izinkambo ngalesi sikhathi sinciphile. Uma ucabangela ukugeleza never-ophela zezivakashi unyaka wonke, kubalulekile kahle ngaphambi ehlosiwe ukuvakashelwa usuku lokunquma lehhotela noma, qiniseka ubhukhe igumbi, athe uma efika hhayi uhlangabezana eziningana nobunzima. Advance yokubhuka uyosindisa ingxenye enkulu ye isabelomali salo. Kodwa indlela ukhethe best? Yini ukubheka kwasekuqaleni?
Izinkambo Ukuqondiswa olunikezwa izinkampani ezinkulu, ngokuvamile zihlanganisa ukuhlala kunalokho elula kude isikhungo esingokomlando edolobheni. Siphakamisa ukuya travel ezimele, kusukela ekubuyekezweni yangempela zezivakashi nabathandi amaholide ukukhetha ihhotela elihlangabezana nazo zonke izidingo zakho kanye ukunambitheka izintandokazi. U Sladku 3 * (Prague) - zithandwa phakathi izivakashi kanye nabahamba emzini. Ake ukulinganisa indawo, izinga induduzo enikezwa lapha amaholide. Mhlawumbe unayo kohambo lwakho ukhetha le ndlela.
Ngakho, U Sladku 3 * (Prague) kuyihhotela umkhaya encane, etholakala endaweni ethulile komuzi. Ihhotela usesikhundleni isakhiwo yokuhlala nomunye umnyango, ngakho kukhona njalo ngokwanele ethule futhi zikhululekile. Luhle labo yizivakashi ezibuka amazwe, uthanda ukuthula, nokuzola. Kuyinto encane kodwa ethokomele, amakamelo ibize ngaphezu kuka yeningi.
Lapho bengena ehhotela, zonke izihambeli uzothola inombolo ebanzi izitshalo bukhoma nezimbali. Lwenza umuzwa emkhathini ekhaya-like, okuyinto izivakashi ezidingekayo ukuze wangakhathala. The elingaphakathi ehlotshisiwe emasikweni best of isitayela Czech. Ihhotela has ikheshi, kodwa abaningi bakhetha ukujabulela ezitebhisini enhle.
Mhlawumbe endaweni ngobukhulu zokuphatha somuzi nje ePrague 6. U Sladku 3 * (Czech Republic, ePrague) is nje iqhele khona. Adume Prague Castle kuba imizuzu 15-20 nje uhambo. Ngaphambi ehhotela kukhona ezokuthutha stop umphakathi, tram, okuyinto ngemizuzu engu-20 nje uyofinyelela enkabeni yedolobha futhi zonke zalo ezikhangayo zenkolo. Izivakashi uqaphele indawo enhle kakhulu ehhotela akudingeki ukuhamba amabanga amade uma liya ukuhamba uzungeze umuzi, ngesikhathi esifanayo akudingeki ukuba sibekezelele lo msindo, befuna, umculo engaphezi wafting kusuka ezitaladini emaphakathi komuzi.
Budebuduze kunendawo encane, yokudlela ethokomele, lapho imadlana nazane cuisine wendawo, baphuze ingilazi yangempela ubhiya Czech. Emgwaqweni efanayo ihhotela impela eningi izitolo Chinese lapho ungakwazi ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo namatshwayo komuzi.
Uma uzibheka izivakashi ngempela ohluphayo, indawo yehhotela kungase kubonakale hhayi inzuzo ngakho futhi elula. Kufanele kuqondwe ukuthi zonke izindawo ezithakazelisayo kuzodingeka ukuhamba ngezinyawo noma izithuthi zomphakathi. Eqinisweni, ukuthatha ukungcebeleka emigwaqweni yalo muzi wasendulo izivakashi eziningi - isipho, akusona isijeziso. Yingakho zonke izivakashi yena kumele lihlele main izinto eziza kuqala ukuphumula. Kodwa abantu ngothi lwabo, waphawula ukusondela ukuba sezindiza.
Udaba sokulungisa ehhotela elifanele ngoba zonke izivakashi. Ngokuqinisekile, akukho namunye ufuna ukubhekana ukufika isidingo amahora ambalwa ukulinda okhiye amakamelo. Ukulandela endleleni zonke izivakashi ufuna ukuphumuza, iqalele kabusha, udle uhambe ngesivinini esingaphezu ukuhamba phakathi komuzi fabulous. Ihhotela U Sladku 3 * (Prague), naphezu kunalokho yeningi kwegumbi, wakwazi ukugcina isimo wenduduzo. Yonke abasebenzi inhlonipho, ocabangelayo, ngokuvamile sokuxazulula kwenzeka ngaphambi kwesikhathi - ongeke uhlale emnyango balambile, bakhathele. Ngisho noma inombolo yakho ukufika akakabi usulungile, uzobe inikelwe okunye ukukhetha noma isitoreji umthwalo. Ungakwazi ukuhamba uzungeze umuzi, kwathi esebuya imithwalo yakho bayobe sebekhona kakade egumbini.
Izinga wenduduzo incike izinombolo. Administration inikeza 23 amakamelo kabili bese 8 kathathu. Amakamelo mancane, kodwa zinikezwe yokuthi lapha uzoba nje alale khona, indawo kuze lala okusele ngokwanele.
Ihhotela U Sladku 3 * (Prague) inikeza design amakamelo sasivumela nesizotha. Uma endlini ephindwe kabili, uzothola imibhede emibili olulodwa eliseceleni kombhede amatafula, lezingubo encane. Lapha ngeke ubone TV, imbala, kodwa izivakashi, isimiso, akudingekile. Uma isimiso khona satellite ithelevishini kanye esiqandisini okufanayo kuwe, Ngokuqinisekile inketho yakho. Ngisho for imali eyengeziwe ngeke uthole oyifunayo. Ifenisha kuyinto ngempela ubudala, ukukhanda baye bakhiqiza cha. Ekhaphethini phansi, sasivumela kuhlanzekile, akukho ndawo, kuzwakala ukuthi abakwazi kodwa jabulani. Ukuhambisa phakathi endlini yokugezela. Ukwamukela izinqubo inhlanzeko enikeziwe eshaweni. Kuyinto neze, kodwa kufanelekile yithela. Uma ungenalo khumbulani yokuntuleka okugeza, dryer izinwele egumbini, ngeke asondele ihhotela U Sladku 3 * (Prague). Izibuyekezo zezivakashi ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi ukuntula amapayipi, kodwa ngokufunwa zonke zokugwema ukuphuka kuyaqedwa. Indlu yangasese has a eshaweni zonke zokugeza, amathawula kanye izimonyo. Ngezinye izikhathi kukhona ukuphazamiseka amanzi ashisayo, ikakhulukazi kusihlwa. Amagumbi bahlanza nsuku zonke, amashidi kanye amathawula baguqulelwa ngesicelo izivakashi. Ngokuvamile, amakamelo abasakwazi ehlanzekile ukhululekile - yini enye edingekayo kwezivakashi.
Ezinye izivakashi akhononde ngokuntuleka insiza, nomshini wokuwasha egumbini. Inkinga kuleli cala isixazululekile - Talk izisebenzi edilini lomshado, bazobambisana ukuhlangabezana kaningi izivakashi futhi kusinike ithuba silungise izinto.
Ihhotela U Sladku 3 * (Prague) has yokudlela ayo lapho ungaba ibhulakufesi. Ibhulakufesi kufakwe segumbi futhi ahlelwe ngaphansi "lezitsha". Yiqiniso, uma zisetshenziswa ukuthi iholide emahhotela kanokusho, abasebenza ohlelweni "zonke okufakayo" ibhulakufesi ungakwazi kubonakale ayivela kancane futhi neraznoobraznymi. Kodwa i- "treshki" European ngisho ezinhle kakhulu: wokudla, granola, yogurt, cottage shizi, isinkwa lisikiwe, amaqanda, izithelo nemifino, itiye, ikhofi. Kwanele ngempela ukudla. Izivakashi abaqhubeka uhambo ekuseni, ungakwazi ukujabulela ibhulakufesi nabo - kubalulekile ukuxwayisa ebusuku ngaphambi abaphathi.
On-site zokungena internet. Ikhwalithi isignali Luhle neze, amakamelo ngezinye izikhathi ingabe ukubamba kungenzeki. Uma kudingekile, ungavula abasebenzi friendly futhi bacele iqalise imodemu - ngisho noma isimo kancane, kodwa izoshintsha. Ngokuvamile, izivakashi zehhotela abahambi abathanda kwasekuqaleni ngokwayo Praha (Prague). U Sladku 3 * inikeza kubo bonke abafisa ukuthenga amathikithi yezokuthutha edilini lomshado futhi ukubhuka zivakashele. Lapha uzothola iziqondiso, ibalazwe eningiliziwe edolobheni - ngamafuphi, konke okudingayo ukuze izivakashi ongenalwazi, owafika ePrague okokuqala. I friendly abasebenzi abakhuluma isiNgisi ngeke aphendule yonke imibuzo yakho, kuzosiza ukucacisa imizila, uzokutshela ukuthi ukuya iphuzu oyifunayo emzini. Ngezikhathi ezithile abasebenzi balapha banobungane kunjalo, umfowethu onomoya ophansi nocabangelayo.
I ezifuywayo ehhotela kuvumelekile. Uma ungakwazi ushiye isilwane sakho ekhaya, hamba nayo. Ihhotela uyabaselwa ngokugcwele, njengoba itholakala indlu yokuhlala. Akuwona wonke amahhotela kungaba ozibongayo inzuzo enjalo. Uma kuvele cool, ubheke Non-ihhotela kusengaphambili - Ayoletha lokushisa egumbini ukuba uphawu oyifunayo.
Iningi zezivakashi eYurophu woza, ukuqonda ukubaluleka edolobheni. Yingakho ngokuvamile umbandela esiyinhloko ihhotela oluthandwa nguye segumbi ke. Ihhotela U Sladku 3 * (Czech Republic, ePrague) siyindlela ibhajethi, lokhu kungenxa kwayo phakathi izivakashi edolobheni.
Njengoba sekushiwo, leli hhotela esakhiweni yokuhlala, ngakho kungaqali indawo siqu. Azikho amagumbi omhlangano a spa, ichibi futhi sauna, ihhotela yenzelwe ngokuphelele ezokungcebeleka abahambi. Ungakwazi bakubheka njengodumo noma kusimo, kodwa European Isigaba 3 * amahhotela kakhulu futhi anikele ukuzijabulisa.
Zonke izivakashi eza e-Europe, ngisho ezingeni lokuhlela wohambo lwabo kufanele kuchazwe nezidingongqangi eyinhloko ukuphumula. Ngokuvamile, labo bantu abeza ePrague futhi ufuna ukuhlola umuzi, zokungcebeleka zayo, cuisine, isiko, ihhotela bachitha nje ebusuku, ngakho kulungele sibekezelele abanye amaphutha. U Sladku 3 * Ihhotela (Prague) inikeza isilinganiso kahle izindleko zokuphila futhi ikhwalithi yamasevisi. Uma uke kungagcini imali, ufuna kukho isabelomali ngendawo ezinhle futhi ukusondela kuya sezindiza, funa le ndlela.
Yikuphi amahhotela eSpain lolwandle ayo?
Ihhotela 3 * Uju kuyona (Phuket, Thailand): incazelo kanye nezithombe
Ihhotela Dessole Abou Sofiane kuyona 4 * (Sousse, Tunisia) izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela "Crystal" (eKemerovo), indawo, izibuyekezo, izithombe, ikheli, inombolo yocingo, ukuphakama
Kuyoba kuhle kanjani: ukucasuka noma ukucasula?
Nokwengezwa Lip ne asidi i-hyaluronic: indlela yokukwenza futhi kungani kudingeka
Game Dev Tycoon - aphambe nezici
Pump ukuchelela engadini, izinhlobo, izimo zokusebenza
Ungayinakekela kanjani isimiso sokuhlobisa? Amagama amahle kakhulu amagundane
Poet Yevgeny Baratynsky: Biography umhlobo Pushkin
Ikhekhe "Pavlová" - ukukhanya kanye Airy